Dowladda Farmaajo iyo KHeyre: SHarcigii waxaa looga kaaftoomay Laaluush! – Puntland Post
Dowladda Farmaajo iyo KHeyre: SHarcigii waxaa looga kaaftoomay Laaluush!
PUNTLAND POST, marnaba masuul kama aha aragtida dadka kale, qoraalkan waxa uu ka tarjumayaa aragtida qoraaga, waxaan kaliya oo dhiirigalinaa isdhaafsiga aragtida. PUNTLAND POST, waxay tixgalin gaara siinaysaa maqaalada sida gaarka ah loogu soo diro ee aan meelaha kale lagu daabacin.
Madaxweyne farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre
Wasiiro ama madax iyo odayaalxoolahoodii lagu laaluushayo oo mid kasta ku faraxsanyahay!
Waxaan iyadana mar keliya ka muuqan oo aan madaxweynaha hannaankiisa siyaasadeed laga dheehan wadaniyaddii uu shaatigeeda soo gashtay, oo xataa haddii ay dhab tahay inuu isaga iska celiyay jinsiyaddii Maraykanka waxaa loo qaadan karaa oo keliya in arrintani ay tahay mid uu doonayo inuu ku xoojiyo hal-ku-dhegyadiisii hore ee lagu soo doortay ee wadaniyadda ku salaysnaa, taasoo dadku xooggiisu qabaan inuusan ka run sheegin oo uusan lahayn dhaqankeeda! Madaxweynuhu isagu dantii uu doono ha ka lahaado inuu celiyo jinsiyaddiisii Maraykanka, laakiin shacabku waxay taaganyihiin Timirtii Hoaraba Dab Loo Waa! Waxaanse shaki ku jirin in arrintani ay qayb ahaan ka mid tahay waxyaabaha ay madaxweynaha la noqotay meeshii uu ka bilaabi lahaa ololihiisa doorashada 2021-ka…Waxaa kaloo loo qaadan karaa inay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah barnaamijyada uu ugu diyaar garobayay sidii mar kale loo soo dooran lahaa, waxaana aad macquul u ah inay wada socdaan duulaanka uu ku qaaday maamul goboleeddada, iyo inuu markii hore iibsaday golihii sharci ahaanshaha maamul-goboleeddada difaaci lahaa (baarlamaankii) isagoo wasiiro ka dhigaya ama mushaaro dheeri ah u qoraya!…